Sharuud lagu xirayo gargaarka Pakistan - BBC Somali - Ganacsi
Sharuud lagu xirayo gargaarka Pakistan
Markii u dambaysay ee la cusboonaysiiyay: 7 Abriil, 2013, 12:50 GMT 15:50 SGA
Dhismaha baarlamaanka Pakistan. Warbixinta ayaa sheegtay in toddobaatan boqolkiiba aysan xildhibaanada bixin canshuur iyadoo ay ku jiraan wasiiro.
Qorshe lagu kordhinayo gargaarka ay siiso dowladda Britain Pakistan waa in lagu xiraa sharuud in dowladda Pakistan ay aruuriso canshuur badan, sida ay sheegeen warbixin ka soo baxday gudiga baarlamaaniga ee gargaarka caalamiga ee (Commons International Development Select Commitee)
Warbixinta gudiga ayaa sheegtay in xooga la saaro sidii loo yarayn lahaa musuqmaasuqa iyo sidii loo taageeri lahaa sharciga.
Gargaarka la siinayo Pakistaan ayaa ku dhawaad laba jibaarmaya, iyadoo Pakistan ay noqon doonto wadanka hela gargaar ka ugu badan ee ay Britain bixiso 2014.
Gudiga ayaa sheegay in gargaarka la kordhinayo sharuud looga dhigo Pakistan inay canshuur qaado, warbixinta ayaa sheegtay in ka yar hal boqolkiiba inay canshuur bixiyaan Pakistan.
Gudiga ayaa dhagaystay marqaatiyaal in canshuurta aan la bixin ay ka soo bilaabato madaxda dowladda, iyadoo toddobaatan boqolkiiba xildhibaanada Baarlamaanka aysan canshuurta bixin, oo ay ku jiraan dhowr wasiiro.
Warbixinta ayaa sheegtay in canshuurta laga aruuriyo dadka Britishka aan laga filan karin inay maalgaliso iskuulada iyo isbitaalada Pakistan, hadii dadkooda lacagta badan qaata aysan bixinayn canshuur.
Warbixinta ayaa sheegtay in musuqmaasuqa uu aad u badan yahay oo lacag badan oo gargaar ah la qasaariyay. Laakiin waxay sheegtay in gargaarka Pakistan la siinayo inay tahay sabab fiican leh, iyadoo saddexdii qofba hal qof uu ku nool yahay in ka yar 45 cents maalintii.